Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mrs. Tone Tinnes as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Norway to the Republic of the Union of Myanmar in succession to H.E. Mrs. Ann Ollestad – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mrs. Tone Tinnes as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Norway to the Republic of the Union of Myanmar in succession to H.E. Mrs. Ann Ollestad
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mrs. Tone Tinnes as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Norway to the Republic of the Union of Myanmar in succession to H.E. Mrs. Ann Ollestad.
Mrs. Tone Tinnes was born on 8th November 1961. She obtainedaMaster of Economics from the University of Oslo in 1988. She served in the Ministry of Industry as an advisor and then as Assistant Director from 1989 to 1996. She joined Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) as an economist in 1996. She served as an Economist/Counsellor in the Norwegian Embassy, Dar es Salaam in Tanzania from 1999 to 2003. She became Head of Unit of NORAD’s public Financial Management and Budget Support from 2003 to 2006. She joined the Ministry of Foreign Affairs in 2006 and served asaSenior Advisor in the Development Minister’s Policy Analysis Unit till 2007. She then served as an Assistant Director up to the post ofaDirector in the International Development Policy Section of the Ministry of Foreign Affairs from 2007 to 2014. Mrs. Tone Tinnes has been serving as the Norwegian Ambassador to South Sudan Since 2014.
Dated:9March, 2016
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံ၏ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော သံအမတ်ကြီးအဖြစ် လက်ရှိ နော်ဝေသံအမတ်ကြီး မစ္စစ် အန် အော်လီစတတ်၏ နေရာတွင် မစ္စစ် တူနယ် တီးနပ်(စ်)အား ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုလာခြင်းကို သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။
မစ္စစ် တူနယ် တီးနပ်(စ်)ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော်စလိုတက္ကသိုလ်မှ စီးပွား‌ရေးပညာရပ်ဖြင့် မဟာဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၌ အကြံပေးအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ ယင်းဝန်ကြီးဌာနတွင်ပင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် နော်ဝေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီတွင် စီးပွားရေးပညာရှင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ၊ ဒါရက်စ်ဆလမ်မြို့ရှိ နော်ဝေသံရုံးတွင် စီးပွားရေးသံမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ နော်ဝေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အသုံးစရိတ်ထောက်ပံ့ရေးဌာန အကြီးအကဲအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီး၏ မူဝါဒရေးရာဆန်းစစ်မှုဌာနတွင် အကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမူဝါဒရေးရာ ဌာနတွင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ယင်းဌာနတွင်ပင် ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ မစ္စစ် တူနယ် တီးနပ်(စ်)သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါ သည်။
၎င်းသည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ သားသမီးနှစ်ဦးရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၉ ရက်